IIMBONO EZINGAMA-40 ZEDESIKA YOKUCWANGCISA - UYILO LWEKHAYA
Iimbono ezingama-40 zeDesika yokuCwangcisa
Ukusebenza ekhaya kunika uninzi lwezibonelelo ezizodwa kunye nemiceli mngeni. Ngenxa yoko, ukuseta iofisi yakho yasekhaya kunokwenza okanye kophule usuku lwakho lomsebenzi lube nemveliso (kunye nemood iyonke!).
Ukuba uyayiqinisa ngokusebenza kwikhawuntara yakho yasekhitshini okanye kwitafile yekofu, lixesha lotshintsho. Jonga ezi zimvo zokusetwa kwedesika kwaye ufumane indlela yokuyila eyona ndawo yokusebenzela ekhaya kunye neemfuno zakho.
1. Iingcamango zokuCwangciswa kweDesksi emnyama
Isaci esidala siyinyani: Umnyama uhamba nayo yonke into. Ukusuka kwifenitshala ukuya kwizixhobo, nkqu nombala weendonga zakho, uyilo lweofisi emnyama yasekhaya ilula kwaye aluphelelwa lixesha.
Umthombo: @mikechudley nge-Instagram
Umthombo: @cyberworldlab nge-Instagram
Bhangqa itekhnoloji emnyama ngesilivere okanye izixhobo ezimhlophe. Okanye hamba kunye nokuseta kwedesika emnyama yonke ukuze ufumane indawo yokusebenza ecekeceke nenesitayile. Ngobuhle bobudoda, faka izinto zesikhumba okanye ukhuni lwendalo kuyilo lwidesika yakho.
Gxininisa ukuseta kwedesika emnyama ngombala ongwevu wekhompyuter okanye iscreen. Unokusebenzisa uyilo lwedesika ye-monochromatic ukwenza i-screensaver enemibala kunye nee-LED zibonakale zinamandla ngakumbi.
2. Iingcamango zokuCwangcisa iDesk
Ukuseta idesika epholileyo, qalisa kwidesika uqobo. Khetha ingqolowa yendalo yendalo okanye idesktop yeglasi ukongeza ubuqhetseba beklasi kwindawo. Gcina ukuhonjiswa okusebenzayo ngaphezulu kokukholisa ubuhle. Izithethi ezizodwa okanye izixhobo ezikhanyayo yindawo efanelekileyo yokuqala.
Umthombo: @ undefxned.var_ nge-Instagram
Umthombo: @ rheus.pcsetups nge-Instagram
Umthombo: @ dylanswaddle90 nge-Instagram
Ifenitshala enesitayile kunye nokuhonjiswa ecaleni, umbutho ngoyena ndoqo ekwenzeni ukuseta kwedesika yakho kubonakale kupholile, kuzolile, kwaye kuqokelelwe. Hlanganisa iishelfu ezidadayo ngaphezulu kwekhompyuter yakho ukubamba izinto zokuhombisa kunye neofisi. Yongeza ishelufu yedesktop yokugcina ngakumbi ekufumaneni indawo yakho yokusebenza.
Khumbula ukujonga umfanekiso omkhulu. Uyilo olupholileyo lwedesika alunakuthetha lukhulu ukuba lonke igumbi alihambelani. Nika ingqalelo kwiinkcukacha ezijikeleze indawo yakho yedesika, ukusuka kwisitulo seofisi yakho ukuya kwigumbi lokukhanya.
3. Iingcamango zokuCwangciswa kweDesk
Imidlalo yokudlala ikhompyuter ifike ngendlela ende kwiminyaka nje embalwa. Ngokunjalo neekhompyuter ngokwazo. Nokuba akukho mntu ubona ukuseta umdlalo kodwa wena, kufanelekile ukuba ujongeke njengemidlalo ebalekayo.
Umthombo: @weigldesign nge-Instagram
Ukuyila ukuseta umdlalo okhangayo kuya kuyenza idesika yakho ibonakale intle naxa ungenalo ixesha lomdlalo. Ngapha koko, akukho nto injengomoya ococekileyo ngokukunceda ukuntywilisela kumdlalo owuthandayo.
Ukuba ubuhle beli xesha langoku, bexesha elizayo ayisosimbo sakho, sukukhathazeka. Yazisa ngezinto eziphilayo ezinjengomthi wendalo okanye izityalo ezinamanzi ukuze ulwe nenkangeleko ejolise kubuchwephesha kuseto lwekhompyuter yakho yokudlala. Umahluko obangelwayo uya kuba sisibongo.
4. Izimvo zokuCwangciswa kweDesika ye-Ofisi yaseKhaya
Intuthuzelo ibaluleke njengokusebenza. Ukuba idesika yakho yomsebenzi imfutshane kakhulu, yongeza kwithala ledesktop ukuze unyuse ikhompyuter yakho iye kwinqanaba lemehlo.
Umthombo: @personayoonji nge-Instagram
Umthombo: @reur_de_jeunesse nge-Instagram
Qinisekisa ukuba kukho indawo eninzi yokugcina enokufikelela kuyo. Ikhabhathi esisiseko yokufayilisha iya kwenza umsebenzi wenziwe ngepini.
Iidesika ezinezitepsi macala onke
Unokumangaliswa ukuba uyile kude kusekwe iofisi yasekhaya kuhlahlo-lwabiwo mali oluqinileyo. Kodwa indawo enye ongafanelanga ukuba skimp isitulo sakho sedesika. Gcina imali esitulweni, isitulo se-ergonomic esihamba kunye nokuhombisa kwakho okhoyo. Okanye cinga ukutshintshela kwidesika emileyo ukuba ukuhlala kakhulu kukuxhalabisa.
5. Izimvo zokuCwangciswa kweDesika ye-iMac
I-Apple ichithe amashumi eminyaka isenza uphawu lwayo lobuhle. Esinye sezizathu eziphambili zokuba abathengi bakhethe iMac ngaphezulu kwePC kungenxa yenkampani yoyilo kuyilo.
Umthombo: @yutatsukaoka nge-Instagram
Umthombo: @workspacery nge-Instagram
Umthombo: @ evie.mine_ nge-Instagram
Umthombo: @aziocorp nge-Instagram
Ukujonga okulula, okuthe ngqo kulungelelwaniso lweMac luboleka kuzo zonke iintlobo zendlela yokuhombisa. Ungagxininisa imigca yayo ecocekileyo kunye nokuhonjiswa kwale mihla. Okanye yisebenzise njengesixhobo esiphambili sokusetwa kweofisi yasekhaya yangoku.
Ukuba uneemveliso ezininzi ze-Apple, yenza uyilo lwidesika olusebenzayo kunokuchasene nengqokelela yakho. Sebenzisa indawo yokuma ukuze uphakamise i-iPhone yakho okanye i-iPad njengeliso lesibini. Susa iitshaja ezingeyomfuneko kwaye endaweni yoko udibanise yonke into onokuyenza iye kwiziko eliphakathi.
6. Izimvo zokuCwangciswa kwedesika yeLaptop
Ukusebenza ekhaya nasekuhambeni kungabonakala kufana, ngakumbi ukuba wenza uninzi lomsebenzi wakho kwiLaptop. Kodwa oko akuthethi ukuba ufuna ukuzinikezela i-ofisi esekhaya nayiphi na into engaphantsi komntu onomatshini opheleleyo.
Umthombo: @wood_create nge-Instagram
Umthombo: @tamsinslawlife nge-Instagram
Umthombo: @ sunshine.and_.lily_ nge-Instagram
Umthombo: @studywvic nge-Instagram
Umthombo: @ olpr.leather nge-Instagram
Umthombo: @jem_lachica nge-Instagram
igumbi lokutyela eludongeni imibono yokuhombisa ngezipili
Umthombo: @fabrite_fabrications nge-Instagram
Umthombo: @casaclarkehome nge-Instagram
Umthombo: @allytheberry nge-Instagram
Umthombo: @abi_not_barbie nge-Instagram
Ukuma kwelaptop yeyona ndlela ingcono yokunyusa ilaptop yakho iye kwinqanaba elifanelekileyo. Sebenzisa ikhibhodi eyahlukileyo ukuguqula iMacbook yakho okanye ilaptop yeWindows kwikhompyuter yasekhaya eyenzelwe ixesha elithile. Unokubhangqa ilaptop yakho kunye nePC okanye iMac ukuze uyisebenzise njengesibini esweni.
Sebenzisa iMacbook okanye enye ilaptop njengoko ikhompyuter yakho yokuqala ingavula indawo yokusebenza. Nika indawo yakho edesikeni ngeenjongo ezininzi kwasekuqaleni. Xa ilaptop yakho ingathathi ndawo, idesika yakho yeofisi inokuphinda kabini njengedesika yokubhala, ilize, okanye isitudiyo sobugcisa esincinci.
7. Iingcinga zokuCwangciswa kweDesika ye-LED
Ii-PC zesiko zithandwa kakhulu ngoku, ngakumbi kwihlabathi lokudlala. Enye yeendlela eziphambili ekwakheni i-PC kukusetyenziswa kwee-LED ezinemibala ngaphakathi kweekhompyuter zekhompyuter.
Umthombo: @exalted_setups nge-Instagram
Umthombo: @easysoftwaredeveloper nge-Instagram
Unako ukubeka ii-strip ze-LED ujikeleze umda wokubek 'esweni okanye ngaphantsi kwekhibhodi yakho ukuze utshatise ukukhanya okwakhelweyo kwizixhobo zekhompyuter yakho. Ukuthatha ngokungangqalanga kulo mkhwa, fihla izibane ze-LED emva kwedesika yakho ukuze ukukhanya kube lula.
Ingcambu yazo zonke iitatoo ezimbi
Ubugcisa bodonga lwe-LED bujongeka buhle ebusuku nasemini. Ukuba ubuchwephesha ngokukodwa kubuchwephesha, cinga ukubopha ii-LED zakho ukuphendula kumculo ovela kwisithethi sekhompyuter yakho.
8. Izimvo zokuCwangciswa kwedesika encinci
Uyilo lweMinimalist konke malunga nokugcina indawo yakho yeofisi ilula kwaye icocekile. Khetha iskimu sombala esine-shades enye okanye ezimbini-ezingathathi hlangothi zezona zilungileyo. Ukuba ufuna ukongeza isimilo kuseto lwedesika yakho encinci, hamba nesibane sedesika esahlukileyo okanye umgcini wekhompyuter.
Umthombo: @tomsdesk nge-Instagram
Umthombo: @erwinwijanto nge-Instagram
Umthombo: @atsuya__n nge-Instagram
Umthombo: @_zsetup nge-Instagram
Beka umsebenzi ngokubaluleka kunye nolungelelwaniso, kwaye unike yonke into eshiye ikhaya. Umzekelo, tyala imali kwindawo yokutshaja yamagnetic kwi-smartphone yakho, kunokuba uyivumele ihlale phezu kwedesika yakho. Ukugcinwa okwaneleyo kwidesika yakho okanye kwenye indawo kwigumbi kuya kuthintela ukungqubana ekwakheni.
Uyilo oluncinci lunokuziva lubanda kwaye alunabumba. Kodwa ungayichasa le mvakalelo ngokusebenzisa izinto zendalo ekuhombiseni kwakho. Ifenitshala yokutya okuziinkozo ngomthi, isikhumba, kunye nezityalo ezinamanzi afumileyo zizinto zonke eziya kufudumeza indawo yokusebenzela encinci.
9. Iingcamango Zokubeka Iliso Kwikhompyutha
Kwinkcubeko yanamhlanje ye-tech-centric, ukujonga ikhompyuter yakho kufana nesango lokuya kwihlabathi elingaphandle. Kodwa inokuba yinkwenkwezi yokuhombisa iofisi yakho yasekhaya. Nokuba usebenza neMacbook Pro okanye isuphavayiza ephezulu ye-intanethi, qiniseka ukusebenzisa ikhompyuter yakho kwisakhono sayo esipheleleyo.
Umthombo: @ motion1_media nge-Instagram
Ukukhetha isithombe esihle, esine-high-definition okanye isiqwenga sobugcisa njengemvelaphi yedesktop yakho isebenza ngokuchanekileyo njengokuxhoma umzobo oyilo eludongeni lweofisi yakho.
Gcina indawo ejikeleze iliso lakho ekucaceni kwezixhobo zekhompyuter ezixineneyo kunye nezinto zeofisi. Faka isibane esincinci se-LED ngaphezulu ukukhusela uxinzelelo lwamehlo ngaphandle kokuphazamisa esweni.
10. Iimbono ezilula zokuCwangciswa kweDesika
Awudingi ukuba ube nombono ozukileyo wokufezekisa ukuseta okugqibeleleyo kwedesika. Endaweni yoko, indawo elula yokusebenza ihlala ilungele ukubonakala kunye nemveliso.
Umthombo: @kukuhandik nge-Instagram
Umthombo: @ cassie.home_ nge-Instagram
Gcina umphezulu wedesika yakho ucocekile kwaye uhlelekile. Ukuba iofisi yakho yasekhaya isegumbini lokuhlala okanye kwenye indawo eneenjongo ezininzi, iya kutsala ngokukhawuleza ukungqubana kwezinto. Gcina imali kumququzeleli wedesika ukuqinisekisa ukuba ukuseta kwakho kuhlala kucocekile kwaye kucocekile.
Kungenxa yokuba ukuseta iofisi yakho yasekhaya kulula oko akuthethi ukuba kufuneka kuyindinisa. Khetha kwaye unamathele kumxholo oyedwa ekuhombiseni kwakho. Zama ukukhetha iinguqulelo zokuhombisa zezinto ezisebenzayo-izithethi, izinto ezikhanyayo, njl. Njl. Okuncinci kunene kunoko!
11. Iingcamango zokuCwangciswa kweDesika encinci
Ukuguqula indawo encinci ibe yiofisi yekhaya ngumceli mngeni abaninzi ekufuneka bejongane nawo. Ngelixa ungayisebenzisa itafile yakho yasekhitshini njengedesika yethutyana, indawo yokusebenza yokwenyani iya kwenza imimangaliso kwimveliso yakho kunye nasemsebenzini.
Umthombo: @katrinahutsonharris nge-Instagram
Umthombo: @rusticworkspace nge-Instagram
Idesika yekona yenye yeendlela ezilungileyo zokugcina iiskwere esikwigumbi elineenjongo ezimbini. Xhoma kwishelufa yokudada phezu kwedesika yakho ukongeza kugcino olukhoyo. Khetha isitulo seofisi ye-ergonomic esisasebenza ngokufanelekileyo phantsi kwe desktop yakho.
Jonga iindlela ezikrelekrele zokuhambisa imisebenzi yeofisi yakho kunye nokuhanjiswa kwidijithali ukugcina indawo. Umzekelo, ungashenxisa isidingo sewotshi ezimeleyo ngokufaka iscreen sobuso bewotshi kwikhompyuter yakho.
12. Izimvo zokuCwangciswa kweDesika yeStudiyo
Umsebenzi weofisi yemveli ayisiyiyo kuphela ubuchwephesha exhomekeke ekusetyenzisweni kwedesika yasekhaya esebenzayo. Uya kufumana kwakhona iiofisi ezininzi zasekhaya ezinikezelwe kuyilo lomdlalo, ukufota, umculo, ukubamba kwelizwi, ukusasaza kwi-Intanethi, kunye nezinye iindlela zobugcisa.
Umthombo: @ alinematii77 nge-Instagram
Nokuba ungayisebenzisela ntoni istudiyo sakho, kunokwenzeka ukuba ijikeleze esweni ikhompyuter. Khetha idesika eneshellu yesilayidi ukuze ubambe ikhibhodi yakho, ibhodi yesandi, okanye esinye isixhobo.
ifashoni yamadoda kwii-1920s
Ixesha elide edesikeni ukwenza nantoni na kunokuba nzima emzimbeni. Gcina imali kwidesika emileyo ukwenza ukuba iintsuku zakho zomsebenzi zikhululeke ngakumbi kwaye zibe nobulali kumalungu akho.
13. Iimbono zokuCwangciswa kweDesika yaBantu baBini
Ukwabelana ngendawo yeofisi akukaze kube lula. Oku kuyinyani ngakumbi xa uhlala neqabane lakho leofisi. Ukwahlula idesika yakho ngokulinganayo nangokucacileyo kunokuba yenye yezona zinto zibalaseleyo ozenzayo kubo bobabini ubomi bomsebenzi.
Umthombo: @hungerfordconstructiondesign nge-Instagram
Umthombo: @homieshomettes nge-Instagram
Uyilo olulinganayo luhlala lukholisa kakhulu, kodwa akuyomfuneko. Hlanganisa kwaye utshatise ingqokelela yedesika yakho ukuze ukhululeke, ujongeke okwexeshana. Logama nje unombala odibeneyo wombala, ukusebenzisa iintlobo ezimbini zesitulo okanye izibane akunakulimaza uyilo lwakho lweofisi.
Ngokudibanisa ukwahlula umphezulu womsebenzi wakho, qiniseka ukubonelela ngendawo yokugcina umntu ngamnye. Sebenzisa iikhabhathi ezahlukileyo zokufaka iifayile okanye iitafile zedesika ezinelebheli ukugcina amaxwebhu kunye nezinto zokusebenza zilungelelaniswe kakuhle.
14. Iingcamango zokuCwangciswa kweDesika yoMsebenzi
Izimvo zokuseta iofisi yasekhaya akunzima ukuza nazo. Ukufumana ukuphefumlelwa okuhlangabezana neemfuno zakho zesitayile kunye nezomzimba, nangona kunjalo, ngomnye umcimbi.
Umthombo: @teiswit nge-Instagram
Umthombo: @salvaged_by_stix nge-Instagram
Umthombo: @nannabachmunkholm nge-Instagram
Umthombo: @bleedcode nge-Instagram
Vumela indawo eninzi emsebenzini wakho ukuze ubambe kamnandi zonke izixhobo zakho. Ukubeka esweni ukujonga ngokuthe nkqo kunokunceda ukugcina indawo yedesika. Ukuba ucwangcisa ukusebenzisa ilaptop okanye ithebhulethi njengokongamela okwesibini, gcina intambo yokutshaja ilungile kwaye ifikeleleka ngokulula.
Iimonitha ezixhonywe eludongeni zisebenza ngokugqibeleleyo kwindawo kwaye zinokwenza ukuseta kwedesika ye-ergonomic ngakumbi ngokuthintela uxinzelelo lwentamo. Khetha idesika yokuma ehlengahlengisiweyo ukunciphisa ukungahambi kakuhle kunye neentlungu zangasemva ezibangelwa kukuhlala esihlalweni seofisi.
15. Izimvo zokuCwangciswa kweDesktop yeDesktop
Nokuba usetyenziselwa isikolo, umsebenzi, umdlalo, okanye ukuzonwabisa okumsulwa, i-desktop yekhompyuter yakho iyinxalenye enkulu yekhaya lakho Ukuhonjiswa kweofisi njengayo nayiphi na enye into. Ukuba uneemonitha ezininzi, fakela imvelaphi yedesktop.
Ewe ikhompyuter yakho yenziwe ngaphezulu kokujonga nje okumbalwa. Veza isitayile sakho kunye nesiko eliyilelweyo ikhibhodi yoomatshini . Gcwalisa naziphi na ii-accents ze-LED ezakhelwe kwi-PC yakho nezibane ezifanayo kwenye indawo kwidesika yakho nakwigumbi lonke.
Hlela izithethi kunye nezinye iipheripheral ngokulinganayo malunga nokujonga ikhompyuter yakho. Chonga amabala athile okuba kufuneka ube nezixhobo zekhompyuter zembonakalo ehleliweyo. Bopha iphedi esemgangathweni yemouse kwidesika epheleleyo yedesika ehambelana nesikimu sombala weofisi yakho yasekhaya.
Izimvo zodonga lwenqanawa zegumbi lokuhlala
Ilitye elijikeleza iibhedi zeentyatyambo
Izixhobo elowo umntu kufuneka abe nazo kwigaraji yakhe
izimvo zokuhombisa umhlaba kwicala lendlu kunye nethambeka
ngaphezulu kwezimvo zokugquma kwepompo yomhlaba